Umatshini wokugcina isitikha somatshini waseTshayina uBT-336 kunye noMthengisi | BGT
BT-336 yenzelwe ukususa isincamathelisi kumphezulu wePET kubushushu obuphantsi.
Isetyenziswa kuzo zonke iintlobo zesincamathelisi phezu kwezinto zePET substrate.
Izibonelelo zokusebenzisa i-BT-336 zezi zilandelayo:
1. Ayonakalisi izinto ze-substrate emva kokucoca, ayityheli kwaye ayinabubele.
2. Susa isitikha ngokucokisekileyo kunye nokunye ukungcola ngaxeshanye.
3. Inkqubo ilula kwaye iyasebenza, ukugqiba ixesha elinye, ixabiso eliphantsi.
4. Inodorous, non-toxic, ayingcolisi imeko-bume. Imveliso ecocekileyo.
Ngeemveliso zodidi lokuqala, inkonzo ebalaseleyo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nexabiso elifanelekileyo, siphumelele indumiso evela kubathengi bamanye amazwe. Iimveliso zethu zithunyelwa mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, eYurophu kunye neminye imimandla.
“UBUME BOKUQALA BUNGOKUQALA NENZUZO UYAQINISEKA”, Le yeyona ngcamango yethu isikhokelo kwishishini.
Ukuba yitekhnoloji ephezulu, ETSHAYINA BGT iimveliso zineempawu zokucaca okuphezulu, akukho tyhefu, akukho livumba kwaye sele lidlulile "kuvavanyo lokutya kunye novavanyo lwetyhefu" kunye novavanyo lweRoHS yiSGS. Iimveliso zinokusetyenziswa kunxibelelwano lokutya.
ITSHAYINA BGT ziya kuzinikezela ukukhuthaza ukusebenzisana okufutshane kunye nexesha elide kunye neenkampani ezingaphezulu kwamanye amazwe nakwamanye amazwe, ngokusekelwe kwimveliso yethu yezobuchwepheshe. ETSHAYINA BGT uya kubonelela kubathengi bethu kungekuphela ngeemveliso ezilungileyo, kodwa kunye nomgangatho ozinzileyo, onyanisekileyo kunye nenkonzo engcono.
Egqithileyo Ukususa inki BT-301/302
Okulandelayo: Ukususa inki BT-300
Ukususa isincamathelisi sePET